I- Kangaroo ibonga uMasipala weTheku – Sivubela intuthuko Newspaper
Iqembu lendlamu i Kangaroo Zulu Dancers uShaka Marine World
Ukunqoba emqhudelwaneni wendlamu owawubanjenwe uShaka Marine World ngonyaka ka 2017 kwabavulela amathuba amaningi okuthuthuka njengoba sebeke bahambela namazwe angaphandle ahlukahlukene. Leliqembu elidabuka e Catoridge KaXimba elaziwa ngokuthi 1-Kangaroo Dancers lithi inselelo ababhekana nayo eyokungabi nalo uxhaso uma kufanele baye emazweni angaphandle.
“Isifiso sethu esikhulu ukungenela umqudelwano iAmerica’s Got Talent kodwa njalo uma sekumele sihambe siba nenkinga yokungalutholi uxhaso. Sizimisela ukukhombisa ngekhono lethu emazweni angaphandle kanjalo nokuzigqaja ngobuthina singamaAfrica,” kusho omunye wabaphathi baleliqembu uMnuz Vumani Gaza.
Ngokusho kukaMnuz Gasa leliqembu liphinde ladla umhlanganiso kulomncintiswano waseShaka ngonyaka odlule nokubanike ithuba lokuba basebenze khona ngokunandisa baphinde bahehe izivakashi. “AmaKangaroo Dancers yiqembu elikhethekile labadansi abagxile ezibeni ezahlukahlukene zomdanso wakuleli okubalwa kuzo umdanso wesiZulu (Indlamu), iGumboot Dance, Ushameni , Isikhuza , uMzansi, isiPanstulla kanjalo nesiTswana. Lokhu kusho ngokusobala ukuthi asizikhohliwe singobani futhi sisukaphi imvelaphi yethu,” kusho uMnuz Gasa.
Uthi leqembu elinamalunga angaphezu kwamashumi amahlanu asuka eminyakeni engu 9 kuya ku 33, lenzelwa ukuthi intsha isuke emgwaqweni futhi ingazibandakanyi nezidakamizwa. “Ngesikwenzayo siqhakambisa amasiko ethu njengamaZulu siphinde sigqugquzele ezokuvakasha. Njengoba saphinde sanqoba emqudelwaneni waseShaka futhi ngonyaka odlule besisebenza khona kodwa ngenxa yokhuvethe sisamile kodwa uma sekuvuliwe sizoqhubeka futhi nokuheha abavakashi ngomdanso wethu wesintu,” kusho uMnuz Gasa.
Ngokunandisa uShaka uthi bayakwazi ukuxosha ikati eziko kanti futhi bakwazile ukuthenga imifaniswano yeqembu namatracksuit nokunye okuningi abakudingayo.
UMnuz Gasa uthi baziqamba ngokuthi bayi Kangaroo Zulu Dancers ngoba iningi labo labhekana nobunzima ekukhuleni kwalo ukusuka ekuhlukunyezweni ngamazwi nangokwasemzimbeni ngamalungu omndeni kuya embonini yezikaqedisizungu befuna ukuphangwa lona kanye ithalente labo.
“Kepha noma ngabe yiziphi izinhlupheko esibhekene nazo, ukuqina emiphefumulweni yethu ngeke kuvumele noma ngubani ukuthi adonse amandla okhokho bethu abasinika wona. NjengamaKangaroo anamandla asebenzisa imilenze yawo yangemuva enamandla ukuvikela bona nezingane zabo ngakho-ke nathi sizovikela, sihloniphe futhi sabelane ngefa ledlozi lethu ngenkathi sigcinana siphephile. Singabadansi beKangaroo Zulu. Amaqhawe akwaZulu kuze kube sekugcineni,” kusho uMnuz Gasa.